You are here: Home / Archives for Xalinta Koritaanka / Sida loo kobcin lahaa
Dunida aquaponics waa maalmo aad u ballaadhan, oo aad u weyn oo xaqiiqda ah in goobaha ay u go'aamiyeen kaliya aquaponics. Halkee ayaan halkaan ku taagayaa? Waa hagaag, ujeedkeyga halkan waa inuu ku tuso habka. Taas kaliya! Mana aha wax ka yar! Tani waa sababta aad halkan uga heli lahayd qaybtaas, gaar ahaan qaar ka mid ah xalalka aquaponics oo ka dhigan qaabka "qaabka" ee aquaponics.